Hordhac: Man City vs Chelsea - Rikoodhada Cajiib Ah Ee Yaalla, Aargoosiga Tuchel, Wararkii U Dambeeyey Iyo Shaxaha Kulanka - GOOL24.NET
Hordhac: Man City vs Chelsea – Rikoodhada Cajiib Ah Ee Yaalla, Aargoosiga Tuchel, Wararkii U Dambeeyey Iyo Shaxaha Kulanka
Labada kooxood ee ugu sarreeya miiska kala-sarraynta horyaalka Premier League ee Manchester City iyo Chelsea ayaa waqtiga Salaadda Casar ee Saacadda Geeska Afrika waxay ku kulmi doonaan ciyaartoodii labaad ee xilli ciyaareedka, taas oo imanaysa xilli ay City 10 dhibcood ku hayso hoggaanka.
Manchester City ayaa qaabbili doonta Etihad Stadium iyadoo raadinaysa inay sii dheeraysato hoggaanka oo ay 13 dhibcood ka sare marto Chelsea, taas oo iyaduna u dagaallami doonta sidii ay toddoba dhibcood uga dhigi lahayd farqiga dhibcaha ay City ka horreyso.
Ciyaartoodii hore ee ka dhacday garoonka Stamford Bridge ee magaalada London, waxa guul 1-0 ah gaadhay Manchester City oo si aad ah uga ciyaar fiicnayd Blues, waxaana Pep Guardiola iyo kooxdiisu ay si xidhiidh ah usoo badiyeen 11kii ciyaaarood ee ugu dambeeyey horyaalka, halka Chelsea ay shantii ciyaarood ee ugu dambeeyey afar ka mid ah barbarro keentay.
Chelsea ayaa 2-1 ku badisay ciyaartii ay Manchester City la dheeshay waqtigan oo kale sannadkii hore, laakiin waxay waajahaysaa hadda xaqiiqada ah in aanay marnaba ka badin Man City laba ciyaarood oo isku-xiga oo ay marti u tahay tan iyo sannadkii 2008 markaas oo ay afar ciyaarood oo isku-xiga oo ay Etihad u safartay ay guulo lasoo laabatay.
Kulanka labadan kooxood ee maanta ayaa ah markii 50aad ee ay wada ciyaaraan horyaalka Premier League intii uu qaatay magacan sannadkii 1992kii. 25kii ciyaarood ee u horreeyey Man City waxay guuleysatay saddex jeer oo kaliya, 18 ayaa la garaacay, afarna barbarro ayay keentay, laakiin 24kii ciyaarood ee ka dambeeyey ayay 12 guuleysatay City, saddexna barbarro keentay, sagaalka kalena laga badiyey. Waxa muuqata inay horumar weyn samaysay 24kan ciyaarood ee dambe.
Ciyaartan ayaa noqonaysa markii labaad ee ay Manchester City iyo Chelsea kulmaan iyagoo ah labada kooxood ee ugu sarreeya miiska kala-sarraynta horyaalka Premier League. January 2015 ayay ahayd markoodii u horreysay ee iyagoo kaalmaha koowaad iyo labaad ku kala jira ay kulmaan, waxaana waqtigaas ay ku kala baxeen 1-1 iyadoo ay Chelsea hoggaanka haysay.
Manchester City si xidhiidh ah ayay usoo wada badisay 11kii ciyaarood ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, waana markii 5aad ee ay gaadho 11 guulood oo isku xiga oo Premier League ah. Afarta jeer ee hore waxa guulahooda kasoo afjaray West Ham oo 2-1 kaga badisay September 2015, Tottenham oo 2-2 ku qabatay August 2019 iyo Manchester United oo 2-0 ku dubatay March 2021.
Ciyaarta: Manchester City vs Chelsea
Manchester City ayaa sheegtay in toddoba ciyaartoy uu kaga dhacay Fayraska Korona ka hor ciyaartii Swindon, kuwaas oo la rumaysan yahay inay ku jiraan Phil Foden iyo Oleksandr Zinchenko oo aan ciyaartan joogin, sidoo kalena John Stones oo dhaawac ah ayaa la sheegay inuu soo dhow yahay balse aan wali diyaar ahayn. Riyad Mahrez ayaa isaguna kaga maqan tartanka qaramada Afrika.
Ederson ayaa haddii uu taam ahaado waxa uu xajisan doonaa booskiisa oo uu kaydka ugu jiro Zack Steffen, waxaana sidoo kale soo laaban doona Aymeric Laporte oo beddeli doona Nathan Ake haddii Stones uu soo kaban waayo saacadaha kooban ee ka hadhsan waqtiga ciyaartu bilaabmayso.
Chelsea waxa uu Thomas Tuchel xaqiijiyey inuu Fayraska Korona kaga dhacay Andreas Christensen, waxaana uu liiska maqaneyaasha kula biirayaa Ben Chilwell, Reece James, Trevoh Chalobah iyo Edouard Mendy.
Thiago Silva iyo N’Golo Kante ayaa kusoo laaban doona kooxda kaddib markii ay kaydka fadhiyeen ciyaartii Tottenham, waxaana uu kubbad-burburiyaha reer France ee Kante uu khadka dhexe la wadaagi doonaa Mateo Kovacic iyo Jorginho.